फेरि गयो ६.२ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, अहिलेसम्म ३४ जनाको मृत्यु, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ? — Sanchar Kendra
१प्रधानमन्त्री बनेको ३ दिन नबित्दै ओलीलाई लाग्यो ठुलो झट्का, सर्वोच्चबाट आयो यस्तो खबर
२नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ हजार नाघ्यो
३स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न नलगाउनू
४प्रधानमन्त्रीलाई फेरि शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
५कोरोनाले देश अस्तव्यस्त बनेका बेला नेपालीहरुको लागि आयो यस्तो खुसीको खबर, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
६आज ७३६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १४५ को मृत्यु
७लेस्टर सिटीले जित्यो एफए कप फुटबलको उपाधि, चेल्सी पराजित
८सकियो ओली-नेपालबिचको ‘वान टु’ वार्ता, के भयो सहमति ?
९कोरोनाबिरु’द्ध ल’ड्न सीसीएमसी बैठकले के गर्यो निर्णय
१०यस्ताे छ इजरेल-प्यालेस्टाइनबीच तनाव भइरहनुकाे मुख्य कारण र १०० वर्ष पुरानो छ मुद्दा
११सिंहदरबारमा ओली र नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता सुरु, यी बिषयमा हुदैछ छलफल
१२कहिलेदेखि सुरु हुदैछ नयाँ शैक्षिकसत्र ? शिक्षा मन्त्रालयले दियो यस्तो जानकारी
काठमाण्डौ । फेरि सक्तिशाली भूकम्प गएको छ । इन्डोनेशियाको सुलावेसी टापूमा स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान ६ दशमलव २ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा कम्तिमा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ । भवनहरु भत्कँदा ६ सय जनाभन्दा धेरै घाइते भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
यस्तै विश्वभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या २० लाख नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १५ हजार २८१ संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या २० लाख नाघेको हो । शुक्रबार बिहानसम्मको तथ्यांकानुसार २० लाख १ हजार २०९ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । कुल संक्रमितको आधारमा मृत्यु हुनेको यो संख्या २.१४ प्रतिशत हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ७ लाख ४७ हजार ३१७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ९ करोड ३५ लाख नाघेको हो । शुक्रबार बिहान यो समाचार तयार पर्दासम्म संक्रमित संख्या ९ करोड ३५ लाख ७ हजार ९४२ पुगेको छ । यसमध्ये ६ करोड ६७ लाखभन्दा बढी संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
कुल संक्रमितको २६.४२ प्रतिशत संक्रमित अहिले पनि उपचारका क्रममा छन् । अर्थात सक्रिय संक्रिमतको संख्या २ करोड ४७ लाख ८ हजार ८५५ छ । यसमध्ये १ लाख ११ हजार ७३१ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वर्ल्डोमिटर्सले जनाएको छ ।